မြားများ: တနေ့ တ၌
ကျွန်တော်က ဘုရားသခင် ဖန်ဆင်းတော် မူတဲ့လူ မဟုတ်ဘူးဗျ.။ဘုရားသခင်လက်က လွတ်ကျတော်မူတဲ့သူ ဟု
သူနှင့်အတန်ငယ် ရင်းနှီးမှုရှိလာသော တနေ့က သူပြောသော စကားတခွန်းဖြစ်သည်.။
ရယ်စရာတော့ အကောင်းသာဗျ..အမေပေးတဲ့ ကံပေါ်ဆိုတဲ့ နာမည်ကို ကျွန်တော်က တောစော်နံတယ်ထင်ခဲ့တယ်..။ဒါကြောင့် မြို့ရောက်တော့ တင်ထွန်းကျော်လို့ ပြောင်းခဲ့တာပဲ။အမေ့ကိုတောင် ဒီသားလေတယောက်တည်းရှိတာ နာမည်လှလှလေး မပေးရကောင်းလားလို့ စိတ်ဆိုးခဲ့သေးတယ်.၊အမှန်တော့ အမေဟာ သူ့တသက်မှာ တခါမှ ဝတ္ထုတောင် ဖတ်ခဲ့ဖူးသူမဟုတ်ဘူး.။ယန်းပေါဆတ်ဆိုတာလည်း သူ့ဘဝမှာ ငပိရေကျိုကောင်းကောင်း တခွက်လောက် အရေးကြီးတယ် ထင်မှာ မဟုတ်ဘူး.။ပြင်သစ်ရုပ်ရှင်လည်း မကြည့်ဖူးဘူး.။ဂုဏ်ရှိအောင် အင်္ဂလိပ်စာအပြင် ဂျာမန်နဲ့ ရုရှား စာ သင်ဖို့လည်း စိတ်ကူးမရှိဘူး..။အမေ့မှာ ဒေါက်ဖိနပ်မရှိဘူး..။အီကေဘားနား သင်တန်းဆင်လတ်မှတ်မရှိဘူး..။ ကိုယ်ပိုင် ဆရာဝန်မရှိဘူး.။ဘဝမှာ အဲသလောက်ရိုးသားအေးချမ်းစွာ နေထိုင်ခဲ့တဲ့ အမေ့ဆီကကျွန်တော် ရူးသွပ်စွာ နာမည်လှလှလေး တစ်ခုကို တောင့်တဖူးသဗျာ...။အတန်ငယ် မူးရီကာစ သူ ပြောခဲ့သော စကားများ.။
အမေရိကန် စိတ်ပညာရှင် ကားလ်မင်နင်ဂျာ ရေးတဲ့ လူနှင့် သူ၏ ပဋိပက္ခ (Man Against Himself) ဆိုတဲ့ စာအုပ်မှာ အရက်ကျွန် ဖြစ်နေတဲ့ လူတွေဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေဖို့ ခရီးတဝက်ရောက်နေတဲ့ လူတွေလို့ မှတ်ချက်ချထားတယ်..။တကယ်တော့ အဲဒါဟာ တဝက်သေဆုံးနေတဲ့ လူတွေလို့ ပြောရင် ပိုမှန်မယ်ထင်တယ်..။ဘဝမှာ တကယ်တန်း လိုအပ်တာက အချိန်ကာလပါပဲ..။အချိန်တန်ရင်တော့ ဘဝဟာ သူ့ဘာသာ အလိုလို ပြီးပြည့်စုံသွားတာပါပဲ..။ယင်းမှာ ပြီးခဲ့တဲ့ လပိုင်းလောက်ကတည်းက သူ သုံးလေ့ သုံးထရှိသော စကားတခွန်း ဖြစ်သည်။
စက္ကန့်မိနစ်တို့ ရွာသောမိုး၌ လုံခြုံရာ ထီးမရှိ.။ရွှံ့နှင့်ရေ ရောနှောသော ဗွက်၌ သေခြင်းတရားတို့သာ အိုင်ထွန်းခဲ့သည်..။
ရက်လည်ဆွမ်း အနုမောဒနာတရားမှ ကောက်နှုတ်ချက်.(ဦးပဉ္စင်း ဦးဝိမလ)
လူတွေက သေရင် အနိစ္စလို့ ထင်ကြတယ်..။ဘုန်းကြီးတို့ သဘောကတော့ သေတာ မသာပဲ။ အသုဘပဲ..။အနိစ္စဆိုတာ ဥပါဒ်၊ ဋ္ဌီ၊ ဘင် က ဘင်သဘောကို ခေါ်တာ.။သတ္တဝါရယ်လို့ဖြစ် ရုပ်နဲ့ နာမ်ရကတည်းက ခဏမစဲ ဖြစ်ပျက် ချုပ်ငြိမ်းနေရတယ်..။စိတ် (၁၇)သက်ကို ရုပ်တသက် အနေနဲ့ ရုပ်လည်း ဖြစ်ချုပ်နေတာပဲ ။အဲဒီလို ခဏမစဲ ဖြစ်ပျက်နေတယ်ဆိုတာ အငယ်စား သေဆုံးနေတာပဲ.။ဒါပေမယ့် အဲဒီအနိစ္စကို လူတွေက မမြင်ကြဘူး..။အနိစ္စကို သန္တတိ ဖုံးတယ်တဲ့။ မြစ်ရဲ့ အလျဉ်လိုပေါ့။ အဆက်မပြတ် ဖြစ်ပျက်နေတော့ မြဲတယ်ထင်တယ်..။ လောကမှာ မြဲတာ ဘာမှ မရှိဘူး.။နိဗ္ဗာန်မရောက်မချင်း သံသရာ တလျှောက်လုံး..ဒီ ရုပ်နာမ်တွေရ ။အခါခါ အိုကြရ နာကြရ သေကြရ..မဆုံးနိုင်ဘူး..။စုတေစိတ်နဲ့ ပဋိသန္ဓေစိတ်ဆိုတာလည်း.ကြားထဲမှာ အကြားအလပ်မရှိ တဆက်တည်း တပြင်တည်း ဖြစ်နေတာ ။ဒီတော့ ပုထုဇဉ်များ သေရင် ဘာမှ မဖြစ်ဘူးထင်လို့ ကြောက်မနေနဲ့.။အဲသလို တွေးကြောက်တဲ့ လူက များတာကိုး.။နောက်ဘဝက အဆင်သင့် မဖြစ်ချင်လို့လည်း မနေရဘူး.။
သေတယ်ဆိုတာ အရပ်ထဲမှာတော့ အသက်မရှူတာကိုခေါ်တာပေါ့လေ ။ဆေးပညာအရတော့ နှလုံး မခုန်တော့တာ ဦးနှောက်က အလုပ် မလုပ်တော့တာ.။ကျုပ်တို့ရဲ့ ကျေးဇူးရှင် မိုးကုတ်ဆရာတော် ဘုရားကြီးကတော့ လွယ်လွယ် ရှင်းရှင်းပဲ ပြောတယ်.။သေတယ်ဆိုတာ ဒီဘဝမှာ နောက်စိတ်မ ဖြစ်တော့တာတဲ့.။
ကာယကံရှင်၏ ကုတင်ဘေးမှ တွေ့ရှိရသော စာအုပ်များ စာရင်း.
(1)Suicide (Operating Instruction)
(2)Let me die before I wake, Derek Humphry
(3)The Compassionate Crimes(Assisted Suicide)
(4)Guide To Self Deliverance ,Arthur Koestlen
(5)Suicide in Amarica,Herbert Hendin
(6)Man Against Himself; Karl A: Menninger
(7)Suicide And Attempted Suicide ,Erwin Stewgel
Referance; သစ္စာနီ၏ ဝတ္ထုတို ၆၀